Alote Myanmar - စကိုင်းတိုင်း မှအလုပ်အကိုင်များ
မှတ်ပုံတင်ရန် ၀င်ရန် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
ယခု App ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ!
Latest App Version : 1.1.8
Your Current App Version :
သင်၏ App သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်။
အိုကေ သေချာပါသည် မလုပ်တော့ပါ
နောက်ဆုံး App ဗားရှင်း : 1.1.8
ကျွန်ုပ်၏ App ဗားရှင်း :
အလုပ်အမျိုးအစား ရွေးပါစက်မှုလက်မှု ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ အော်ပရေတာစားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ယာဉ်မောင်း၊ ပစ္စည်းပို့၊ အငှားဆိုင်ကယ်မောင်းငွေကြေးနှင့်စာရင်းကိုင်စားသောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုအထွေထွေလုပ်သား၊လုံခြုံရေးကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သိုလှောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာစက်ရုံနှင့် အထည်ချုပ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအရောင်းပိုင်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် အလုပ်အမျိုးအစား ရွေးပါ
Jobs in စကိုင်းတိုင်း, Myanmar
စကိုင်းတိုင်း အလုပ်6ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ စကိုင်းတိုင်း, တွင် ထိပ်တန်း အလုပ်အကိုင်များ။ Alote.com.mm တွင် နောက်ဆုံး လစ်လပ်နေရာများအတွက် အလုပ်ရှင်များထံ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပါ။
(ရှင်းပြီး...) ရှင်းမည် OK
စက်မှုလက်မှု ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ အော်ပရေတာ (123)
ယာဉ်မောင်း၊ ပစ္စည်းပို့၊ အငှားဆိုင်ကယ်မောင်း (72)
ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သိုလှောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ (163)
စက်ရုံနှင့် အထည်ချုပ် (59)
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ကွန်ပျူတာ 13
လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း 8
ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ 21
နောက်ထပ်အလားတူအလုပ်များ တင်သောအခါ သင့်အားအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု၍ အလုပ်သတိပေးချက်စာမျက်နှာတွင် သင့်အလုပ်သတိပေးချက်ကိုပြင်ပြီး ထပ်မံကြိုးစားပါ။
သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို 09 မှစရိုက်ပါ
သင့်ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် အကောင့်မရှိသေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အကောင့်အရင်ဖွင့်ပါ။
အလုပ်သတိပေးချက်ရယူမှုတွင် error ဖြစ်နေပါသည်။ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံကြိုးစားပါ။
Mechatronicကျွမ်းကျင်ပညာရှင် | Technician (Mechatronic)
Win Brothers Group of Companies Limited
အရာတော် | စကိုင်းတိုင်း . စကိုင်းတိုင်း .
-Turbine စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများအား ကျွမ်းကျင်စွာ ပြုပြင်နိုင်ရမည်။ -Turbine လည်ပတ်မှု ၊ Procedure ကို ကောင်းစွာသိရှိပြီးထိန်းကြောင်းမောင်းနှင်နိုင်ရမည် ။ -Turbine CCR အပိုင်းအား ကောင်းစွာ ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ -Turbine shutdown ဖြစ်လျှင် breakdown မဖြစ်စေရန် နှင့် စက်ပစ္စည်းများ မထိခိုက်စေရန် ထိန်းသိမ်းပေးရမည်။ -စီမံကိန်း သို့ ရောက်ရှိလာသော စက်ပစ္စည်းများ၏ Value များ ၊ Gland များ ၊ Safety value များ ၊ Oil tanker များ သေချာစစ်ဆေး၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ -Turbine များအတွက် ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်များအားဆောင်ရွက်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - Yearly Bonus Increment - Overtime payment
တင်သောနေ့: 06 Dec 2021
အလုပ်အမျိုးအစား: စက်မှုလက်မှု ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ အော်ပရေတာ
Recruiter active6mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Sales Representative (Monywa)
ဆိုင်အရောင်းစာရေး | Shop Sales, Sales Representative
Mahar Loka Co., Ltd.
မုံရွာ | စကိုင်းတိုင်း စကိုင်းတိုင်း
သတ်မှတ်ထားသောနယ်မြေအတွင်း Target Volume များကို ရရှိစေရန် ကုန်ပစ္စည်းများကိုဆိုင်များတွင်ရောင်းချနိုင်ရမည်။ လစဥ် Sales Target ပြည့်မှီစေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမည်။ Customer များနှင့်ခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - Phone Bill Allowance - Daily Allowance - Yearly saving bonus - Performance Appraisal
တင်သောနေ့: 24 Nov 2021
Recruiter active 21 hours ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Junior Loan Officer (Sagaing)
ချေးငွေတာဝန်ခံ | Loan Officer
ချောင်ဦး | စကိုင်းတိုင်း စကိုင်းတိုင်း
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခု ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ရိုးသားကြိုးစားပြီး အများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ဒေသခံ ဦးစားပေးမည်။ ကျေးရွာများသို့သွားရောက်ပြီး ငွေကြေး၀န်ဆောင်မှု့များဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ငွေကြေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းတာ၀န်ယူဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်
တင်သောနေ့: 22 Nov 2021
Recruiter active 1 week ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Branch Coordinator (Shwe Bo)
ကြီးကြပ်ရေးမှူး | Office supervisor
Yoma Heavy Equipment
ရွှေဘို | စကိုင်းတိုင်း စကိုင်းတိုင်း
-ဌာနခွဲအတွက်အလုံးစုံစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည် - branch ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် strategy ရေးဆွဲနိုင်ရမည် - ဒေသတွင်းစျေးကွက်အခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ပြီး လက်ရှိနှင့် အလားအလာရှိသော အရောင်းအခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ရမည် -ငွေရေးကြေးရေးရည်ရွယ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ပြီးစစ်ဆေးရမည် -budget ကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးရန်ပုံငွေကိုသင့်တော်သလိုခွဲဝေသုံးစွဲနိုင်ရမည် -တိုးတက်မှုဒေသများကိုရှာဖွေ၍ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အားသာချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောမှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရမည် - ဖောက်သည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိရမည် -အပြိုင်အဆိုင်စျေးကွက်များနှင့်ရင်ဘောင်တန်းပြီးစျေးကွက်ရွေ့လျားမှုနှင့်ထိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများကိုတင်ပြပါ -ကုမ္ပဏီ၏လိုအပ်ချက်အတိုင်း ကိုပံ့ပိုးရန်လိုအပ်သည် -သင်နှင့်သင်၏ဌာနခွဲမှလူများသည်ကုမ္ပဏီ၏ SOP နှင့်မူဝါဒများကိုလိုက်နာနိုင်စေရန် ဦးစားနိုင်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: - Uniform
ေငြေၾကးအရာရွိ (Finance Officer) - ျမင္းမူ
ဘဏ္ဍာရေးအကူ | Finance Assistant
Tu Tu Finance WCI Myanmar CoLtd
မြင်းမူ | စကိုင်းတိုင်း စကိုင်းတိုင်း
ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရမည္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုတာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ရိုးသားၾကိဳးစားျပီး အမ်ားႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ရမည္ ေဒသခံ ဦးစားေပးမည္
အငယ်တန်းချေးငွေအရာရှိ (စစ်ကိုင်း ၃ ဦး)
ရေဦး | စကိုင်းတိုင်း စကိုင်းတိုင်း
အငယ်တန်းချေးငွေအရာရှိ – ၃ ဦး (Preferable Male) ရေဦး - ၂ ဦး၊ ယင်းမာပင် - ၁ ဦး အဓိကတာဝန်များ - ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုသူများနှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမည်။ - ဈေးကွက်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ချေးငွေနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲသူထံသို့ ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း၊ ပြန်လည်ကောက်ခံခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် နိုင်ရမည်။ - ချေးငွေလက်ခံထားသူများ၏ တိုးတက်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ်အကဲခတ်၍ အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်း၏တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိထံ သတင်းပေးပို့နိုင်ရမည်။ - ချေးငွေဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - ဘောနပ်စ် - ခရီးသွားလာစရိတ် - ဆေးကုသမှု ခံစားခွင့်
Recruiter active 1 day ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Copyright © 2021 ALOTE.com.mm
မူဝါဒ | စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း Careers@Alote ကျွန်ုပ်တို့ကို Facebook မှာရှာလိုက်ပါ
ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ရန် ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူကြော်ငြာလိုက်ပါ
မှတ်ပုံတင်ရန် အလုပ်လျှောက်လွှာတင်ရန် အလုပ်ရှာရန်
Myanmar Employer Awards Best Companies in Myanmar Myanmar Real Estate & Property JobNet Professional Workers